मर्कूस ८ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
८ त्यस्तै अर्को एक चोटि, एउटा ठूलो भीड जम्मा भएको थियो र तिनीहरूसित खानलाई केही थिएन। त्यसैले चेलाहरूलाई बोलाएर उहाँले यसो भन्नुभयो: २ “यो भीड देखेर मलाई साह्रै दया लाग्यो, किनभने तिनीहरू मेरो वरपर बसेको तीन दिन भइसक्यो अनि तिनीहरूसित केही खानेकुरा छैन। ३ मैले तिनीहरूलाई भोकै घर पठाएँ भने तिनीहरू बाटैमा ढल्नेछन्‌। हुन पनि, तिनीहरूमध्ये कोही-कोही त निकै टाढाबाट आएका छन्‌।” ४ तर चेलाहरूले उहाँलाई भने: “यस्तो अनकन्टार ठाउँमा यत्तिका मानिसहरूलाई पुग्ने रोटी कहाँबाट ल्याउने?” ५ तैपनि उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो: “तिमीहरूसित कति वटा रोटी छ?” तिनीहरूले जवाफ दिए: “सात वटा।” ६ तब उहाँले भीडलाई चौरमा बस्न अह्राउनुभयो अनि सात वटा रोटी लिएर धन्यवाद चढाएपछि भाँच्नुभयो। त्यसपछि ती रोटीहरू बाँड्नको लागि चेलाहरूलाई दिन थाल्नुभयो र तिनीहरूले भीडलाई बाँडे। ७ तिनीहरूसित केही साना माछाहरू पनि थिए। अनि धन्यवाद चढाएपछि उहाँले ती माछाहरू पनि बाँड्न लगाउनुभयो। ८ यसरी तिनीहरू सबैले खाए र तृप्त भए अनि तिनीहरूले उब्रेको टुक्राटाक्री जम्मा गर्दा सात वटा ठूलो डालो भरियो। ९ खानेहरूमध्ये चार हजारजति पुरुष थिए। अन्तमा उहाँले बिदाबारी गरेर तिनीहरूलाई पठाउनुभयो। १० अनि तुरुन्तै आफ्ना चेलाहरूसित डुङ्गा चढेर उहाँ दलमनुथाको* भूभागमा पुग्नुभयो। ११ यहाँ फरिसीहरू आए र उहाँसित वाद-विवाद गर्न लागे अनि स्वर्गबाट एउटा चिन्ह मागेर उहाँको परीक्षा गर्न खोजे। १२ तिनीहरूको कुरा सुनेर उहाँ असाध्यै दुःखी हुनुभयो र सुस्केरा हाल्दै भन्नुभयो: “यस पुस्ताले किन चिन्ह खोज्छ? म साँचो-साँचो भन्छु, यस पुस्तालाई कुनै चिन्ह दिइनेछैन।” १३ यति भनिसकेपछि तिनीहरूलाई त्यहीं छोडेर उहाँ फेरि डुङ्गा चढ्नुभयो र पारि जानुभयो। १४ एक चोटिको कुरा हो, तिनीहरूले आफूसित रोटी लैजान बिर्सेछन्‌ र तिनीहरूसित डुङ्गामा एउटा रोटीबाहेक अरू केही खानेकुरा थिएन। १५ उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्दै कडा चेतावनी दिनुभयो: “तिमीहरूको आँखा खुल्ला राख अनि फरिसीहरू र हेरोदको खमिरदेखि होसियार रहो।” १६ त्यसैले आफूसित रोटी नल्याएको विषयलाई लिएर तिनीहरू आपसमा भनाभन गर्न थाले। १७ यो थाह पाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “रोटी नल्याएको विषयलाई लिएर तिमीहरू किन आपसमा भनाभन गर्छौ? के तिमीहरूले अझै बुझ्न अनि अर्थ लगाउन सकेनौ? के तिमीहरूको मन बुझ्नै नसक्ने गरी बोधो भयो? १८ ‘के तिमीहरू आँखा भएर पनि देख्दैनौ र कान भएर पनि सुन्दैनौ?’ अनि के तिमीहरूले बिर्स्यौ, १९ मैले पाँच वटा रोटी भाँचेर पाँच हजार पुरुषलाई खुवाउँदा तिमीहरूले कति डालो टुक्राटाक्री बटुलेका थियौ?” तिनीहरूले जवाफ दिए: “बाह्र।” २० “मैले सात वटा रोटी भाँचेर चार हजार पुरुषलाई खुवाउँदा तिमीहरूले कति वटा ठूलो डालोमा टुक्राटाक्री बटुलेका थियौ?” अनि तिनीहरूले जवाफ दिए: “सात।” २१ त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “के तिमीहरूले अझै अर्थ बुझेनौ?” २२ तब उहाँहरू बेथसेदा पुग्नुभयो। यहाँ मानिसहरूले उहाँकहाँ एक जना अन्धो मानिस ल्याए र उसलाई छोइदिन बिन्ती गरे। २३ अनि उहाँले त्यस अन्धो मानिसको हात समाएर गाउँबाहिर लैजानुभयो। त्यसपछि उहाँले उसको आँखामा थुक्नुभयो र ऊमाथि हात राख्दै सोध्न थाल्नुभयो: “के तिमी केही देख्छौ?” २४ त्यस मानिसले नजर उठाएर यताउता हेऱ्यो र भन्न थाल्यो: “म मानिसहरू देख्छु तर तिनीहरू यताउता हिंडिरहेका रूखहरूजस्तै देखिन्छन्‌।” २५ उहाँले फेरि त्यस मानिसको आँखामा हात राख्नुभयो। त्यसपछि ऊ निको भयो र सबै कुरा छर्लङ्गै देख्न थाल्यो। २६ अनि उहाँले उसलाई यसो भनेर घर पठाउनुभयो: “तर तिमी गाउँतिर चाहिं नपसनू।” २७ तब त्यहाँबाट येशू र उहाँका चेलाहरू सिजरिया फिलिप्पीका गाउँहरूतिर जानुभयो र बाटोमा जाँदै गर्दा उहाँले चेलाहरूलाई सोध्न थाल्नुभयो: “मानिसहरूले म को हुँ भन्दैछन्‌?” २८ तिनीहरूले उहाँलाई भने: “कसैले बप्तिस्मा गराउने यूहन्ना, कसैले एलिया अनि कसै-कसैले चाहिं भविष्यवक्ताहरूमध्ये कोही एक।” २९ अनि उहाँले तिनीहरूलाई फेरि सोध्नुभयो: “त्यसोभए, तिमीहरूचाहिं म को हुँ भन्छौ?” पत्रुसले उहाँलाई जवाफ दिए: “तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।” ३० अनि उहाँले तिनीहरूलाई उहाँबारे कसैलाई नबताउनू भनी कडा चेतावनी दिनुभयो। ३१ साथै, उहाँले तिनीहरूलाई मानिसको छोराले धेरै दुःख भोग्नु, धर्म-गुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट तिरस्कृत हुनु अनि मारिनु र तीन दिनपछि ब्यूँतनु आवश्यक छ भनेर सिकाउन थाल्नुभयो। ३२ हो, उहाँले निर्धक्क भएर यो कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर पत्रुसले उहाँलाई अलग्गै लगेर हप्काउन थाले। ३३ तब फनक्क फर्केर उहाँले चेलाहरूतिर हेर्नुभयो र पत्रुसलाई हप्काउँदै यसो भन्नुभयो: “ए सैतान, यहाँबाट गइहाल, किनकि तिम्रो सोचाइ परमेश्वरको होइन तर मानिसहरूको हो।” ३४ त्यसपछि उहाँले भीड र चेलाहरूलाई एकसाथ आफूकहाँ बोलाएर यसो भन्नुभयो: “यदि कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो यातनाको खम्बा* उठाओस् र निरन्तर मेरो पछि लागोस्। ३५ किनकि जसले आफ्नो ज्यान* बचाउन चाहन्छ, उसले त्यो गुमाउनेछ तर जसले मेरो र सुसमाचारको खातिर आफ्नो ज्यान गुमाउँछ, उसले त्यो बचाउनेछ। ३६ हुन पनि, कुनै मानिसले सारा संसार प्राप्त गर्छ तर त्यसको लागि उसले आफ्नो ज्यानै गुमाउँछ भने उसलाई के फाइदा हुन्छ र? ३७ साँच्चै, मानिसले आफ्नो ज्यानको सट्टामा के दिन सक्छ र? ३८ किनकि परमेश्वरप्रति वफादार नरहने पापी पुस्तामाझ मेरो चेला बन्न र मेरा वचनहरूमा विश्वास गर्न जसले सरम मान्छ, मानिसको छोरा पनि आफ्नो बुबाले दिनुभएको गौरवसहित आफ्ना पवित्र स्वर्गदूतहरू लिएर आउँदा उसलाई स्वीकार्न सरम मान्नेछ।”
^ मर्कू ८:१० * यो सम्भवतः मगादान वा छेउछाउको इलाका हुनसक्छ।
^ मर्कू ८:३४ * अतिरिक्त लेख ६ हेर्नुहोस्।
^ मर्कू ८:३५ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।